Kuhle Honeymoon Izindawo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kuhle Honeymoon Izindawo EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 28/05/2021)
Ayikho ngempela indawo engcono yokuba nothando kunokukhetha izindawo ze-Honeymoon eYurophu.
With the lula travel isitimela, ungavakashela amathani izindawo ezinhle eholidini langemva komshado wakho. Ngamandla amaningi ilanga, Usebe lwesiqhingi amahle, izivini, nezinketho engapheli ehhotela kanye yokudlela romantic, it’s no wonder the Best honeymoon destinations are in Europe! Nazi yethu amathiphu aphezulu ngokwenza kakhulu wokuvakashela nomuntu okhethekile.
Honeymoon Destinations In Europe – Positano, Italy
Positano kuyinto edolobhaneni lwewa ku eningizimu ye-Italy sika Amalfi Coast. Ngokwe-legend adalwe Neptune, uNkulunkulu wolwandle owayekade ephuma uthando ngensini. itshana wayo ngasebhishi futhi emaweni, emigwaqweni emincane uphahlwe izitolo nezindawo zokudlela ezinhle yikho idume. Wena nomngane wakho womshado kufanele uvakashele Chiesa di Santa Maria Assunta obonisa isithonjana wangekhulu le-13 WaseByzantium of the Virgin Mary.
Kungani ungalweli off abanye ukuthi ikhekhe lomshado and head to The Sentiero degli Dei izintaba umzila, exhumanisa Positano kwezinye izindawo emizaneni eseduze imilingo ugu. Qeda usuku lwakho off ukungcebeleka emigwaqweni yasendulo, ukuthola zokudlela eyiqiniso, nezindlu mlando izungezwe emthambekeni wentaba futhi izibonelo zalokho the ukudla eyiqiniso. Ungase uzibuze ukuthi ngeke nanini asishiye kukankosikazi wakho!
This picturesque and romantic village is an idyllic place to spend a few days as one of your Honeymoon Destinations In Europe. Emehlweni beige, pink, izindlu ophuzi kanye terra-cotta ehlukahlukene phansi eceleni nogu kuya crystal blue amanzi Mediterranean idume emhlabeni jikelele futhi uye waba izivakashi mesmerizing kulesi sigaba ovusa ogwini Italy amakhulu eminyaka.
Thanda ukungena ephusheni, Positano iyindawo ephelele ukugubha kokuba othandweni! Kuningi ukwenza; uqinisekile ukuthi ube uhambo eliyingqayizivele.
EMilan Salerno Izitimela
Florence ukuze Salerno Izitimela
Bari ukuze Salerno Izitimela
ERoma Salerno Izitimela
Honeymoon Destinations In Europe – saseHvar, Croatia
Uma kuziwa ekutholeni izindawo zakho ezinhle ze-Honeymoon EYurophu, saseHvar, Croatia ngokuvamile emibhangqwaneni uhlu! Imihlathi-bephonsa ubuhle bemvelo, amadolobha asezindongeni asendulo, nokuluhlaza okwesibhakabhaka okungapheli kwe-Adriatic: ICroatia iyisinqumo esihle sokwenza iholide elifushane lomshado noma ikhefu elincane lothando. Ngamandla amaningi ilanga, izivini, nezinketho yokudlela, uzothanda lapho uzothola i-honeymoon eYurophu kule ndawo enhle kakhulu.
Bazinza ogwini Croatia sika lwaseDalmatia, SaseHvar yilona lizwe edume ehlobo isiqhingi uya khona. Siyazi Imishado kungase kubize, ngakho-ke ngeke bajabule ukwazi ngokuba ukuthi yaziwa ethengekayo on the list of Honeymoon Destinations In Europe!
Leli dolobha elincane elibiyelwe ngodonga eligcwele ukwakhiwa kweGothic yilona elifanele ngokuphelele imibhangqwana efuna ama-vibes akhululekile ngomlando omncane nokubona indawo emini. Nakuba ngomkhumbi ingenye yezindlela ezingcono kakhulu ukubona Croatia ngokuvamile-futhi masivume, also a great way to arrive on a kukankosikazi-Njengoba lwale nyanga, Uber uye ngokusemthethweni esesifundazweni esifundeni, kodwa ngokuqinisekile ngeke ngendlela ongase ucabange.
Londoloza Isitimela akusho ukuhamba ngqo saseHvar, Croatia. Senza, Nokho, ukuhamba ukuze uxhumano iziteshi ukuthi ungathola ukuthi lapho ufuna ukuya khona!
The popular transportation app is ukukhulula UberBoat eCroatia, okwenza kube lula kunanini ukujabulela usuku olwandle phezu elikhazimulayo Adriatic Sea. Previously launched in Miami and Istanbul, UberBoat kuyinto ukuthi bekuyokwenzekani ukube Suv yayo nangokobulili ithole kanye yacht yangasese. ku-Ikholi yakho charter kuyoba nje njengoba lula ukubhuka ku-Uber yakho uhlelo lokusebenza njengoba imoto futhi izotholakala lonke Croatia kwezinye ethandwa ezidonsela izivakashi efana Split, Dubrovnik, futhi Korcula Island.
Switzerland might not be the first place to come to mind when you think of Honeymoon Destinations In Europe, kodwa nakanjani ukuzicabangela. Nakuba yayincane isihlobo ukuba emazweni amaningi-European, Switzerland possesses enkulu indawo yemvelo. nemizana Picturesque, emadolobheni eyinkimbinkimbi, amagugu amasiko acebile, futhi okwasemuva okumangazayo kukhefu lakho langemva komshado noma ngabe uvakashela ebusika, entwasahlobo, ihlobo, noma iwe.
Zurich kuyinto Ngokosiko ezinogqozi City futhi amadolobha ethu phezulu ukuvakashela. Izindlela Fairytale, chibi ebabazekayo promenades, nezintaba ezilele iqhwa eneziqongo ngemuva wenze yezithombe ezimangalisayo! A iziphakamiso ezimbalwa semisebenzi zihlanganisa; Bebambene ngezandla emhlabeni Lake Zurich ogwini onqenqemeni edolobheni. Qasha paddleboat ukuba abone umuzi Ukuyiqhamukela esiyingqayizivele. Uma ugibelile, ungathatha e vistas romantic ezigodini bezitolo ezibukeka ezungeze, sihambisane ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi umhlali.
Uma ukuthenga nedayimani kwi- ajenda, ke uku endaweni efanele! Uzothola amaningi ku Bahnhofstrasse Zurich sika, okuyinto evame elika Fifth Avenue yeSwitzerland. Ngo Zurich india watchmakers futhi Jewelers, kanye izitolo, ukulinga abathengi nge akhazimulayo iwindi ubonisa.
Silibangise lokugcina – Rome, Italy
inhloko-dolobha Italy sika kuyajabulisa imibhangqwana esanda kushada. ke ingenye avakashelwa ohlwini Honeymoon Destinations EYurophu, Uphelele ukujabulela izinsuku zokuqala ezimbalwa beshadile. Kusukela yayo ezitaladini cobbled nezimpawu zomhlaba ukuze iminyuziyamu, amatiyetha, futhi yothando zokudla, uzoba nakho amaningi okujabulela ukwenza ndawonye.
Kumelwe uhambele I izinkundla Roman! Baziwa emhlabeni jikelele ngoba bemibuso yabo kanye ukunakekela imininingwane. amatiyetha engenalutho Uyi kwamehlo bheka. Lapho iqala ukunanela ngokusebenza kwabaculi be-opera abenza kahle kakhulu, isipiliyoni kunzima ukuchaza.
Ukufakazela ukusebenza kwe-opera bukhoma enkundleni yemidlalo yaseRoma kufanele kube kuhlu lwakho lwezinto ezizokwenziwa.
Ngokombono wemibhangqwana okuzayo kusuka kwamanye amadolobha Italian, ekufinyeleleni eRoma ngesitimela kungaba inketho enhle. Roma Termini, Rome wesitimela ixhunywe Italian ehlukahlukene amadolobha aseYurophu. Imvelo esihlalweni sakho kusengaphambili. Sebenzisa Gcina Isitimela ukubhuka ngaphandle imali isitimela sakho uhambo kumaminithi.
Bologna eRoma Izitimela
We hope we have given you some inspiration for your Honeymoon Destinations In Europe. Qiniseka ukuthi ukubhuka zonke isitimela travel wakho ngokusebenzisa Londoloza Isitimela ukuqinisekisa okusheshayo, isevisi ezingabizi!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhoneymoon-destinations-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / fr ukuba / es noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#kukankosikazi #romance europetravel zothando
Yiziphi Kunayo Instagrammable Izindawo EYurophu
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izikhangibavakashi Europe